Ny fampiasana teknika isan-karazany dia mamorona amperora romana | Famoronana an-tserasera
Tsy vao sambany izahay nahita asa toy izao, nanomboka nahita fanarenana am-pelatanan'ny emperora romana hafa isika toa ilay nasehon'ity mpanakanto ity izay mampiasa fanarenana ny tarehy, AI ary Photoshop.
Haround Binous no mpanakanto ao ambadik'ireny fialam-boly izay tsy ratsy, na dia tavela miaraka amin'ireo an'ny Espaniola aza izahay izay hasehonay anao eto ambany ary afaka mampiseho anay na dia ny toetran'ny emperora sasany nankahalaina indrindra tamin'ny tantara aza.
Binous dia mampiasa ny fitambaran'ny fankasitrahana ny tarehy, Faharanitan-tsaina artifisialy ary Photoshop miaraka amin'ny tantara ara-tantara mba hampisehoana amintsika hoe hanao ahoana ireo amperora romana ireo ankehitriny. Raha ny fahitanay azy dia somary nasiana endrika toa azy ireo raha mampitaha azy ireo amin'izany isika Mpanakanto espaniola manolotra zava-misy tena izy.
Marina fa tena zava-misy ny asany, saingy raha mijery ny antsipiriany isika, na dia ny sasany aza dia feno volomaso rehefa tsy mahatratra izany firy ireo sary sokitra ataon'ireny emperora ireny, tena feno pitsopitsony amin'ny ambaratonga tena misy.
Ary marina fa amin'ny ankamaroany ny fialam-boly dia misy antsipiriany toy ny vava na orona izay tsy mitovy daholo. Tena misy fiheverana lehibe tokoa izy ireo ary mety ho tafiditra amin'ny lalao video mampiseho ny tantaran'ny romana, saingy somary lavitra isika raha mitady zavatra 'kanto' kokoa.
Na izany na tsy izany, toa antsika izany mahaliana ny mampiseho ny asan'ity mpanakanto ity mba hanazava azy noho ny milalao tantara, ary miorina amin'ny sary sokitra avy amin'ny anarana lehibe amin'ny kanto. Ary vitsy no nahatratra ny marika, ka avelanay ihany koa ianao hanapa-kevitra ny amin'ny marina izay nananan'i Binous tamin'ny fisolo tena tena ireo emperora romana ireo.
Del Mpanakanto Espaniola tsy fantatray ny anarana, noho izany dia mifikitra amin'ny asany izahay mba hiezaka hatrany hanao izay tsara indrindra fanajana ny asan'ny mpanakanto tamin'ny vanim-potoana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mpanakanto dia mampiseho izay mety ho toetran'ny amperora romana amin'ny tena fiainana miaraka amin'i AI sy Photoshop
Ny mari-pankasitrahana Macro Photography Awards dia navoaka tamin'ny sary vitsivitsy
Fanehoana "Misaron-tava" mba hanaitra ny fahatsiarovan'izao tontolo izao